Hanti dhowraha qaranka oo la filayo inuu maanta xilka wareejiyo - Caasimada Online
Home Warar Hanti dhowraha qaranka oo la filayo inuu maanta xilka wareejiyo
Hanti dhowraha qaranka oo la filayo inuu maanta xilka wareejiyo
Muqdisho (Caasimadda Online) – Hanti dhowraha qaranka Dr. Nur Faarax Jimcaale oo ay dowladda Soomaaliya xil ka qaadis ku sameysay ayaa la filayaa inuu maanta xilka wareejiyo.
Madaxweyna Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Shalay quraac u sameeyey ku xigeenka Hanti Dhowraha qaranka si ay isaga wareystaan xil ka qaadistii lagu sameeyey Nuur Faarax iyo haddii uu isaga xilkii sida kumeel gaarka ah loogu magacaabay la wareegay.
Ku xigeenka Hanti dhowraha qaranka Dr Cali abuukar ayaa madaxweynaha u sheegay inuu hanti dhowraha qaranka diiday inuu xilka wareejiyey isla markaasna aysan weli u suurtagelin inuu shaqada la wareego.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si deg deg ah u wacay Taliya nabadsugidda qaranka Sanbaloolshe, waxaana lagu amray inuu Hanti dhowraha la xiriiro kuna amro inuu xilkaas isaga wareejiyo haddii kale sharciga la marsiin doono.
Madaxweynaha ayaa amray in Maanta oo Axad ah xilkaas lagu wareeji ku xigeenkiisa, waxaana la rajeenayaa in maanta uu Hanti dhowraha si nabadgalyo ah xilkaas isaga wareejiyo, maadaama madaxweynaha uu waraaq rasmi ah ku soo saaray.
Markay xil wareejintaas dhacdo kadib, ayaa waxaa la filayaa in maalmo gudahood uu madaxweynaha ku magacaabo shaqsi kale oo buuxin doono booska laga buriyey Hanti dhowraha qaranka.
Haddii ay Maanta dhacdo in xilka laga wareejiyo Nuur Faarax midaas waxay ka dhignaan doontaa inay dowladda Soomaaliya leedahay awood weyn isla markaasna ay dhamaatay qabyaaladii ka jiri jirtay Soomaaliya, taasoo ah wax lagu faano karo, maadaama aan qabiil waxba lagu gaari karin.